'अभागी राष्ट्र नेपाल जसलाई अपराधीले चुसे, लुटे र खुर्केर खाए' | Citizen Post News
यदि यो घटना सत्य हो भने जनताको कलेजो भुटेर खाने इदी अमिनको नेपाली छाउरा अफताब आलम र त्यसका वफादारहरूलाई देख्दा लाग्छ नेपाल त्यस्तो अभागी राष्ट्र हो जसलाई राजनीतिक अपराधीहरूले चुसे, लुटे र खुर्केर खाए ।
यो कस्तो दुर्भाग्य हिटलरका नेपाली अवतारहरूलाई नेपाली जनताले लोकतन्त्रको पहरेदार ठानिरहेका छन् र ज्वाँइ पाले झैं पालिरहेका छन् । १२ वर्षपछि अफताब आलमको असली चेहेरा सार्वजनिक भएको छ । यो चेहेरा यति कुरुप र दर्दनाक होला भन्ने कल्पना नेपाली समाजले गरेको थिएन ।
पाँच-पाँच पटक मन्त्री भैसकेको ब्यक्तिको यो अपराधले गरेको संकेत र चुनौती अझै डरलाग्दो छ । यो १२ बर्षको बीचमा आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने नेताहरूका मुखमा चुकुल किन ठोकिएको थियो, किन कोही बोलेन ? यो पंक्तिकारलाई कुनै भ्रम छैन कि नेपालको राजनीतिमा यस्ता अफताबहरूको कुनै कमी छैन ।
भ्रम एउटा कमजोरी हो र त्यो एक हदसम्म अपराध पनि हो । चोर ढोकाबाट छिर्ने बिरालाहरूलाई दुधको साक्षी ठान्ने नेपाली जनताको भ्रम नै नेपालको भविष्यको सबैभन्दा ठूलो संकट हो । राष्ट्रिय राजनीतिका अफताबहरू जसको वैभवता र सम्पन्नता, शान, सौकत र चक्काचौंध जीवनशैलीका खातिर मुलुकको कति सम्पदा लुटिएको छ ?
निर्दोष जनताका जीवन पुर्न कति चिहान खनिएको छ ? कति हाडखोर पोलिएको छ ? कति जनताको आँसु र रगत बगाइएको छ ? कतिका नलि हाड भाँचिएको छ ? अपराधीहरू रगत खान्छन्, लाशमाथि सुत्छन् । अपराधीहरूको कुनै समवेदना र सह्रदयता हुँदैन र यही अपराध जब राजनीतिमा प्रवेश गर्छ तब तानाशाहहरूको जन्म हुन्छ ।
जनताको रगत खानु लाशमाथि सुत्नु र लाशमाथि राजनीति गर्नु तानाशाहहरूको दैनिकी बन्ने गर्छ । अपराधमा जब राजनीतिक रंग मिसिन्छ वा मिसाउने दुस्साहस गरिन्छ तब अपराधीहरू चोखिने खेल शुरू हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक अपराधीकरण कुनै नौलो होइन । राणाशासनको पृष्ठभूमि अपराध थियो । पंचायती व्यवस्थामा पनि कैयौं राजनितीक अपराधका काण्डहरू घटे किन्तु कसैलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइएन ।
मल्लिक आयोग रद्दीको टोकरीमा फ्याँकियो । राजनीतिक अपराधीकरणलाई मान्यता दिइयो र दोषीलाई पालैपालो सत्तासीन गराइयो ताकि भविष्यमा आफूमाथि औंला नठडियोस् । हत्या र अपराधका बारदातहरूको जो शिलशिला नेपालको राजनीतिमा फैंलिदो छ, यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने समाज दण्डहीनताको पराकाष्ठामा जानेछ ।
कानुनी राज्यको तमाशा बन्नेछ ।
राजनीतिक आवरणमा गरिने अपराधलाई चोख्याउने जुन खेल हुँदैछ त्यो घातक छ । नकचराहरूको कुनै औषधि हुँदैन । आफ्नो नाकैमुनि भएको अपराधको विभत्स घटनालार्ई नजरअन्दाज गर्ने तत्कालीन नेतृत्वलाई पनि कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । चाहे त्यो जोसुकै किन नहोस् । अपराधीहरू चोखिनु हुन्न ।